I-backlink ye-SEO - ukuthenga noma cha?
Asikho isidingo sokuthi ukuthatha isinqumo sokwakha emuva ngemuva kwe-SEO noma ukuthenga kuzo esikhundleni sakho kuphela kuwe. Kodwa ake sibhekane nakho - ukuthola ama-backlink akhokhelwa kuwebhusayithi yakho akuyona nje into epholile kepha into eyingozi ngempela. Yiqiniso, umuntu angathola ngokushesha ngemuva kokukhokha emuva kwe-SEO bese uyithenga kalula, isibonelo kusuka kumhlinzeki wokuqala obonwe kwiWebhu. Ngakho-ke, ucabanga ukuthenga amanye ama-backlink akhwalithi kuwebhusayithi yakho, kunjalo? Futhi ngokwenza ngaleyo ndlela, ngikholelwa ukuthi kungcono ukuthi uqaphele ngokugcwele lokho okuzobhekana nakho. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuthola ukunqoba okusheshayo nokusebenzisana nomuntu wakho ku-SEO smart ngokwanele ukwakha i-PBN (inethiwekhi yeblog yangasese). Mhlawumbe uzosetha amaphrofayili womuntu siqu emithonjeni yezenhlalakahle ngezinhloso zokwakha isixhumanisi. Noma kungenzeka ukuthi usalokhu unesisindo sezinzuzo kanye nokuqapha ukugcina ama-backlink noma ama-backlink e-organic organic kuphela noma ukuzithenga esikhundleni salokho - kungcono ungethembe noma kunjalo, njengoba ngibonile konke. Ngingasho ukuthi mhlawumbe noma yiziphi izinkokhelo ezikhokhelwe ukuthuthukisa i-SEO ye-website zihlale ziletha imiphumela yesikhashana kuphela ngaphandle kokuthi inqubekela phambili enjalo ithole umsebenzi onzima kakhulu futhi odla isikhathi. Eqinisweni, ukuzama ukukhohlisa nge-Google kusho ukuthi ngokuqinisekile uzobhekana nesigwebo ukuze izikhundla zakho zamanje zikhishwe noma zibhujiswe ngisho. Ngisho ukweqa ngokweqile lapho konke kuphelela futhi yonke iwebhusayithi ikhishwa ohlwini lwosesho kuze kube phakade. Yingakho uma ungazizwa ukuthi ungenzani nge-backlink ye-SEO - uthenge noma cha - nansi konke okudingeka ukwazi, ngokufingqiwe. Ngakho-ke, uma usacabanga ngama-backlinks akhokhelwayo, qiniseka ukucabangela amaphuzu e-bullet alandelayo:
Ngisho ukuthi ukuthenga emuva kwe-backlink kuhambisane nemikhombandlela esemqoka ye-webmaster eyenziwe ngu-Google ngokwayo. Yinto yokuqala okufanele ukwazi, futhi ngikholelwa ukuthi lesi sizathu sesivele sikwanele ukwenza ukuthi ushintshe ingqondo yakho.
ukuthenga (ukuthengisa) ama-backlink aphumelele ngokuqinisekiswa kwe-Pagerank;
ukushintshanisana nezixhumanisi ngokuqondile, noma ukuthola izikhala ezinemininingwane yangemva kwemali ngokushintshanisa imali, ezinye izixhumanisi, nanoma yini enye yezinto ezibonakalayo zokuhweba;
ukubonisana kwemvelo ngokubonakalayo, nanoma yikuphi okunye okusemthethweni okusebenza ngokungahambisani nokuqhutshwa kokuxhumana;
isihloko sokukhangisa noma isivakashi sokuthumela ukuhlukumeza esikalini, ngokuvamile kufaka phakathi izixhumanisi ezihlanganiswe namahange anikezwa ngegama elingukhiye;
ukusebenzisa noma yikuphi amathuluzi okuzenzekelayo, ama-intanethi, noma amasevisi ezenzakalelayo ezinjongo zokukhiqiza izixhumanisi.
Kuthathwa ngokujwayelekile, mhlawumbe wonke umzamo wokukhohlisa, ukuphatha noma ukuhlukunyezwa ngezinjini ezinkulu zokusesha
(njengo-Google uqobo) kungukuphulwa kwemithetho esemqoka yomdlalo. Yingakho ukwenza noma yikuphi okukhulunywe ngaye ngaphambilini akusifisi futhi akukhuthazi neze, ngaphandle uma ufuna ukuhlushwa isaphulelo esisheshayo ngokushesha. Yiqiniso, abanye abakwa-webmasters, abanikazi besayithi, kanye nabachwepheshe be-SEO bazimisele futhi bazimisele ukugembula ngamaphrojekthi abo oku-intanethi. Kodwa nansi umugqa ophansi - ama-backlink akhokhelwayo abiza imali eningi. Futhi emva kwakho konke, ukuzithengela iwebhusayithi yakho noma ibhulogi kungakubiza kakhulu kunemali Source .